Raisin’ny Tanàna Voara ireo marary tsy manana soritr’aretina mampiahiahy • AoRaha
Tsy mandray an-tanana an’ireo mararin’ny Covid-19 manana fahasarotana ny eny amin’ny Ivon-toerana fitsaboana momba ny Covid-19 (CMC) eny amin’ny tanàna Voara Andohatapenaka. Natokana ho an’ ireo marary tsotra, izay nankatò ny andrana fitsaboana amin’ny alalan’ny fanafody tsindrona ihany ny eny amin’ity toerana ity, araka ny vaovao avy amin’ ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Voalaza fa tsy manana sampan-draharaha hisahana ny vonjy aina eny, ka tsy afaka handray an-tanana an’ireo marary mafy. Eny amin’ny hopitaly manana an’ireo fitaovana manampy amin’ny ôksizena no hitondrana an’ireo marary manana fahasarotana. Efa manomboka mandray an-tanana an’ireo marary ireo ny sasany amin’ny toeram-pitsaboana tsy miankina.
Manao fitiliana ihany koa anefa ny CMC, ankoatra ny fanaovana ny fitsaboana hanarahana maso ny fiasan’ny fanafody atsindrona. Misy ny lamina eny an-toerana ka ireo manana fambaran’aretina ihany no hanaovana fitiliana, izay mivaly afaka 72 ora. Homena fanafody ireo misy soritr’aretina sy ahiahiana ho mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid-19, aorian’ny fizahana hataon’ny mpitsabo.
Fanaraha-maso ny tsena Voatsirika tampoka ireo fitaovana ampiasain’ny mpivarotra
Entana ilaina andavanandro :: Be mpiandry ny tsena mora eny amin’ny fokontany
Fepetra fisorohana :: Miato indray ny tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra